N'otu aka ahụ, enyi nwoke onye ahụ a na-enyo enyo, bụ maazị Ameke Udolu bụkwa onye a nwụchikọrọ, bụ onye a na-enyo enyo na o soro kpaa nkàtà ọgwụ ego ahụ.
N'ajụjụ ọnụ a gbara ya na be ya bụ Nando dị n'okpuru ọchịchị Anambra East, Chiifu Innocent Ọkadịgbo, bụ nwa nwoke mbụ nke nwaanyị ajàdụ ahụ e gburu egbu kwuru na ahụ zuru nne ya okè tupuu ọnwụ ya, ma sị na nne ya kpọrọ ya n'abalị mbụ nke ọnwa Mee ma gwa ya na ọ ghọtaghị ka nwanne ya nwoke ahụ bụ Christopher na enyi nwoke ahụ bụ Ameke si bàta n'ime ụlọ ya, ma na-agbagharị okiriki ebe ahụ, na-ekwugasị ihe dị iche iche mmadụ apụghị ịghọta, dịka a ga-asị na ha na-agba afa.
Ọ sịkwa na nne ya gwara ya na kemgbe ụbọchị ahụ na egwu na-atụ ya ibi n'ụlọ ahụ naanị ya, n'ihi ihe ahụ ha mere n'ime ụlọ ya, ma sị na ka ọ gachara otu ụbọchị, na ihe ọzọ ọ nụzịkwara bụ ka otu onye agbataobi ha bụ Pius Aniefule kpọrọ ya n'ekwe ntị sị ya na ọ hụrụ ebe ozu nne ya tọgbọrọ n'ogbu ọbara. O kwuru na ngwa ngwa nke ahụ gachara, na nwanne ya nwoke Christopher, bụ onye akpọbeghị ya kemgbe ahọ 1999 kpọkwara ya n'ekwentị gwa ya na nne ha anwụọla, ma sị na ya onwe ya gabara njem na Minna nke steeti Naịja, ndị mmadụ wee kpọọ ya na-agwa ya ihe ahụ.
Dịka akụkọ siri kọọ, oriakụ Roseline Ọkadịgbo bụzịkwa onye e gburu, ghụkọrọ anya aka ekpè ya na mkpụrụ obi ya. Nke a mezịrị Pius jiri tibe mkpu oge ọ hụrụ ihe ahụ, ndị mmadụ wee gbakọọ n'ebe ahụ. Ma mgbe nke ahụ na-eme, ihe ọzọ a hụzịrị bụ ka Ameke siri n'otu ime ụlọ nwaanyị ahụ gbapụta, ndị mmadụ wee chụba ma nwụchikọọ ya, nara ya ekwentị ya ma site na ya chọpụta mkparịta ụka ya na Christopher, bụ onye a chọpụtara na ọ gwara ya gbara ọsọ bịa chere ya n'isi ụzọ Nteje ngwa ngwa ọ kpachara arụ ahụ, ka ha abụọ wee soro larie; ụmụ okorobịa nọ ebe ahụ wee malite ịhọ ya aka ururu họrọ ogbe ogiri.
N'okwu nke ya, onyeisi ọchịchị obodo ahụ bụ Chief Ignatius Aghadinunọ onye, bụkwa onye zọrọ Ameke Ụbọchị ahụ kwuru na obi luru ya ilu nke ukwuu oge ọ bịaruru ebe ahụ wee hụ ozu nwaanyị ahụ na etu e siri bọkasịa ya, ma hụkwa ndị ntorobịa ahụ iwe juru n'obi, na Ameke, bụ onye ha tigoro gwoo gwoo, nke mezịrị ka ọ kpọọ ndị ọrụ nchekwa ka ha wụchaa n'ebe ahụ, bịa kpụrụ ya.
Otu ọ dị, maazị Christopher ahụ bụzịkwa onye a nwụchikọrọ ebe ọ na-ezogharị na nke otu onye dibịa, wee hafekwa ya n'aka ndị ọrụ uwe ojii.
N'aka nke ya, nwanne nwaanyị ahụ e gburu egbu, bụ Chiifu Uyammadụ Anaeliakụ kwuru na ọ bụghị ụbọchị ahụ ka Christopher bidoro gwọba ọgwụ, kọọ na ụmụ iteghete n'ime ụmụ iri na otu nwaanyị ahụ mụrụ anwụọla n'ụzọ mmadụ apụghị ịkọwa, ma kpọkuzie gọọmenti steeti ahụ ka o nye aka hụ na a bọpụtasịrị ọgwụ niile e liri n'ụlọ ahụ.
Mmadụ abụọ ahụ ugbu a nọzịkwa n'aka ndị uwe ojii, ebe onye ndu ndị uwe ojii kwere nkwa na ha ga-eme nnyocha ghe anya oghe iji hụ na e sogidere okwu ahụ wee ruo n'ebe ọ kwụsịrị.